လူငယ်များ လေ့လာနိုင်ရန်နှင့် စိတ်အားတက်စေရန် Wynee မှ ပထမဦးဆုံး အကြိမ်ဖြင့် Career Gallery ပွဲအား ကြီးမှူး စီစဉ်ခဲ့သည်။ ထိုပွဲသို့ တက်ရောက်သူ အယောက် ၁၅၀ ကျော်ရှိခဲ့ပြီး ဟောပြောသူ အယောက်၂၀ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက်နေ့မှာ WyneeMyanmar.com မှ ကျင်းပသော ပထမဆုံး Career Gallery ပွဲအား ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုပွဲသည် တစ်နေ့လုံး ကြာမြင့်ခဲ့၍ မြန်မာနိုင်ငံမှ စီးပွားရေး နယ်ပယ်တွင် ရှေ့ဆောင်နေသော ခေါင်းဆောင်များနှင့် လူမှုရေးတွင် အောင်မြင်ကျော်ကြားနေသူများ အားလုံးကို တစ်နေရာတည်း၌ တစ်စုတစ်စည်းဖြစ်စေပြီး ကျောင်းသား ကျောင်းသူများနှင့် တက်သစ်စ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော လူငယ်များအာ အတွေ့အကြုံ ပညာပေးရင်း အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းအကြံဥာဏ်ကောင်းများကို ဝေမျှပေးခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါပွဲသည် စနေနေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင်Thalun International School (Ahlone Campus) ၌ Yangon University Motivators English Club (YUMEC) နှင့်အတူ ပူးတွဲ ကျင်းပဖြစ်ခဲ့သည်။ Yangon University Motivators English Club (YUMEC) သည် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ အခြေပြု တည်ထောင်သည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်၍ မျိုးဆက်သစ် မြန်မာလူငယ်များအား အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား စွမ်းရည် တိုးတက်မြင့်မားစေရန် ရည်ရွယ်သည့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါပုံ - YUMEC FounderZayYa Moe Kyaw မှ ဤ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ ဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့အစည်းသည် ၂၀၁၆ ခုနစ်တွင် မည်ကဲ့သို့ စတင် အသက်ဝင်လာပုံကို ရှင်းပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် Wynee Founder & Investment Professional ဖြစ်သူ Jessica Aung မှ အလုပ်အကိုင် ရွေးချယ်မှုသည် မည်မျှ အရေးပါပုံကို ရှင်းပြခဲ့သည်။
ယခု ပွဲတွင် အောင်မြင်ကျော်ကြားသူ အယောက် ၂၀ မှ စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးမှုများနှင့် အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ၊ ဟောပြောမှု များ စုစုပေါင်း အစီအစဉ် ၁၀ ခုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
အထက်ဖော်ပြပါပုံ - စိတ်အားတက်စေသည့် ဟောပြောသူ အနေနှင့် Model –Thandar Hlaing မှ Personal Brand တည်ဆောက်ပုံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နည်းလမ်းများကို ဝေမျှပြီးတော့ ပွဲအစီအစဉ်ကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူမ ရဲ့ ဖက်ရှင်နဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား ပါဝင်မှုတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သူမရဲ့ ဘ၀အတွေ့အကြုံတွေကို လူငယ်တွေကို ဝေမျှပေးခဲ့ပါတယ်..။
ဒီ့နောက်မှာတော့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူတွေဟာ လူမှုရေးနယ်ပယ်မှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားနေသော အဆိုတော် ချမ်းချမ်းရဲ့ အားတက်ဖွယ်ရာ ဘ၀ဇာတ်ကြောင်း၊ အလုပ်အကိုင် ပြောင်းလဲမှုများနှင့် အောင်မြင်မှု နောက်ကွယ်မှ အကြောင်းအရာများကိုလည်း ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ “ကိုယ့်မှာ ခိုင်မာတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိမှသာ အောင်မြင်နိုင်မယ်” လို့ မချမ်းချမ်းက ဝေမျှသွားပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါပုံ - စကားဝိုင်းဆွေးနွေးမှုများ
ဆွေးနွေးမှု အစီအစဉ် (၁) – ကိုယ်ဟာ ဘယ်လို ကုမ္ပဏီမျိုးမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ သင့်တော်သလဲ ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ( လက်ဝဲဘက်မှ စ၍ Isabella Sway Tin, Co-founder at Rangoon Tea House
မှ “ ကိုယ်ဟာ အသေးစား စီးပွားရေးတွေကို လုပ်တဲ့အခါ စီးပွားရေးလုပ်မယ့် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ၀ယ်သူတွေနဲ့ သင်တော်တဲ့ နေရာဖြစ်အောင် လုပ်သင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ၀န်ထမ်းတိုင်ဟာ ကုမ္ပဏီတိုးတက်မှုအတွက် တစိတ်တဒေသ ကနေ အရေးပါနေပါတယ်” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်၊ Kyawt Kay Khaing, Deputy CEO of United Amara Bank မှ “ သင်ယူမှု ဖြစ်စဉ်က ဘယ်တော့မှ ရပ်သွားမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ လေ့လာသင်ယူမှုကို အမြဲအစဉ် မပြတ်ဖို့ လိုပါတယ်” ဆိုပြီး ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ နောက်တော့ Mei Mei Chua, Managing Director of United Beauty Palace Myanmar [SMU Myanmar Alumni Chapter] မှ “ မိမိရဲ့ တန်ဖိုးကို ခိုင်ခိုင်မာမာ သတ်မှတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာတော့ flexible- တခြားသူတွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ လုပ်ကိုင်ပါ” လို့ မျှဝေခဲ့ပြီး Rose Swe, Co-founder at Mango Group
မှ “ ဘယ်အရာကိုပဲ လုပ်လုပ် ကောင်းအောင် လုပ်ပါ” လို့ မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ Tang Wai Leong, Wynee Team Member & Associate Director at Klareco Communications မှ moderator အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။)
စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးမှု အစီအစဉ် (၂) - ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးပြုနိုင်တဲ့ အလုပ်ကိုင်မျိုးကို ဘယ်လို ရွေးချယ်မလဲ။ ( လက်ဝဲဘက်မှ စ၍ Nyi Nyein Aye – Co,founder at ThitsaWorks မှ “သင် ၀ါသနာကြီးမားတဲ့ အရာများကို စတင်လုပ်ဆောင်ပါ။ ထို့နောက် အဲ့အရသာကို မြည်းစမ်းကြည့်ပါ။” Martin Pun, Head of CSR at Yoma Strategic Holdings မှ “ ကိုယ် တနေ့နဲ့ တနေ့ လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကို အမြဲ စိတ်တက်တက်ကြွကြွနဲ့ စတင်ပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ အလုပ်ကို ရွေးပါ။ အဲ့အခါ ကိုယ်က အဲ့အလုပ်ကနေ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ခံစားချက်ကို ရရှိပါလိမ့်မယ်။” Emilie Röell, Founder at Doh Eain
မှ “ ရေတ၀က် ပြည့်နေတဲ့ ဖန်ခွက်ကိုပဲ ကြည့်ပေမယ့် ရှုထောင့် ပြောင်းလဲတဲ့ ပုံပြင် ဥပမာလေးလိုပဲ ကိုယ်ရရှိတဲ့ အနေအထားပေါ် ကျေးဇူးတင်တဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပါ။” Bradley Kopstick, Myanmar Country Manager at Insitor Management
မှ “ တခြားသူများကို ရေရှည် ကူညီနိုင်မယ့် အလုပ်အကိုင်မျိုးကို ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။” စသဖြင့် ဟောပြောသူများမှ အသီးသီး မျှဝေပေးသွားပါတယ်။ Nicole Aye, Wynee Team Member & National Project Officer, Partnerships Development at UNESCO မှ moderator အဖြစ် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။)
အထက်ဖော်ပြပါပုံ - Career တိုးတက်ဖို့အတွက် နည်းပညာ Resources များကို အသုံးပြုခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကို Yan Lin Thor, Wynee Member & Co-founder at evolx IT & Business Solutions မှ မျှဝေပေးခဲ့ပါတယ်။ “Wynee Forum ဟာ တနိုင်ငံလုံးက လူငယ်တွေကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အလုပ်အကိုင်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ အရင်းအမြစ် တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ” လို့ Yan က မျှဝေပေးသွားပါတယ်။
Consultant at World Bank Group & former Fulbright scholar တစ်ဦးဖြစ်သူ Kyi Pyar Chit Saw ကတော့ ဘွဲ့လက်မှတ်တွေထက် ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်အားထက်သန်ရာနဲ့ ပါရမီ နောက်ကိုသာ လိုက်သင့်တယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါပုံ - ဆွေးနွေးပွဲများ
လက်ဝဲဘက်မှ စ၍ Myat Noe Aye, Head of Client Services at ANZ [SMU Myanmar Alumni Chapter] မှ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာနှင့် ဘဏ္ဍာရေး အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သတ်ပြီးလည်းကောင်း၊ Kyaw Kyaw Win, CEO at Innoveller [SMU Myanmar Alumni Chapter] မှ နည်းပညာ အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သတ်ပြီးလည်းကောင်း၊ Kaung Set Zaw, Executive Director at Golden Express Tours & GM at Golden Eagle Ballooning [NTU Alumni Association Myanmar] မှ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သတ်ပြီး လည်းကောင်း အသီးသီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါပုံ - ကိုယ်ရေးကိုယ်သွေးတိုးတက်မှုနှင့် ဆိုင်သော ဆွေးနွေးပွဲများ
Khine Tharaphi Din, Deputy Head, Learning & Development at Yoma Bank [SMU Myanmar Alumni Chapter] မှ အချိန်ကို စီမံ ခန့်ခွဲအသုံးပြုပုံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်မှာတော့ Hyeran Kim, Projector Manager at United Nations Development Programme Myanmar မှ အဓိပ္ပာယ်ပြည့်ဝစေသော လူမှုဆက်ဆံရေးများ ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ သူမပြောခဲ့တဲ့ နည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ “ နေထိုင်တဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့ နဂိုမူရင်းအတိုင်း ဟန်မဆောင်ဘဲ ရိုးသားစွာနေထိုင်ပါ။ တခြားသူတွေဟာ ကိုယ့်အပေါ်မှာ ကောင်းသော ထင်မြင်ချက်လေးတွေ ကျန်ရစ်နေပါစေ။”
အထက်ဖော်ပြပါပုံ - နောက်ကွယ်မှ ပုံရိပ် မြင်ကွင်းများ
အပေါ်ဆုံး ၀ဲဘက်မှ ပွဲမစမှီ တွင် အတိုချုပ် တာဝန်ခွဲဝေခြင်း၊ ပွဲမတိုင်ခင် လုပ်ဆောင်မှုများ၊ ကြိုဆိုဧည့်ခံရေး စားပွဲတစ်ဝိုက်တွင် ရှိနေကြသော YUMEC အဖွဲ့ဝင်များ၊ Moe Thitsa, Wynee co-founder မှ အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် တာဝန်ယူခြင်း၊ ပျော်ရွှင်နေကြသော ပွဲတက်ရောက်သူများ၊ အဖွဲ့လိုက် ဓာတ်ပုံများ။
We also would like to express our gratitude to MRTV-4 TV channel for their excellent coverage of our Career Gallery event.
Wynee hosts first ever Career Gallery to inspire youth, over 150 participants and 20 speakers attending.
Yangon, 3rd February 2018 – WyneeMyanmar.com organised its first ever Career Gallery,aday-long event that gathered leading business leaders and social influencers from Myanmar to provide mentorship and career advice to students and young working professionals.
The event, which was held on Saturday, February3at Thalun International School (Ahlone Campus), was hosted together with Yangon University Motivators English Club (YUMEC),astudent club that aims to upgrade English proficiency among the younger Myanmar generation.
Above: YUMEC founder ZayYa Moe Kyaw explained how the student-led club came to life in 2016. Wynee Founder & investment professional Jessica Aung talked about how important making informed decisions about career choices is.
The program featured around 20 established guests and celebrities across 10 sessions, which included panel discussions, interviews, inspirational talks and workshops.
Above: MOTIVATIONAL SPEAKERS International model Thandar Hlaing opened the event and shared tips about personal branding inspired by her career in fashion and TV. Students heard the inspirational story of singer and social influencer Chan Chan, who shared about the key turning points in her life and the secret behind her success. "Only if you have main aim or main theme, you can succeed."
Above: Panel Discussions
“PANEL DISCUSSION #1: Am I suited to work atastartup, SME, conglomerate or MNC?” From the left, Isabella Sway Tin, Co-founder at Rangoon Tea House
: "In small companies, you need to adapt quickly to the environment and customers. Employees are part of the growth." Kyawt Kay Khaing, Deputy CEO of United Amara Bank: "Learning is non-stop, you need to learn non-stop throughout your career." Mei Mei Chua, Managing Director at United Beauty Palace Myanmar [SMU Myanmar Alumni Chapter]
: “Be firm in your values, but be flexible in methods.” Rose Swe, Co-founder at Mango Group
: "Whatever you do, do it well." Tang Wai Leong, Wynee [Associate Director at Klareco Communications] as moderator.
“PANEL DISCUSSION #2: How do I haveapurpose-filled career, making positive impact?” From the left, Nyi Nyein Aye, Co-founder at ThitsaWorks: “Act on your passion. Taste it.” Martin Pun, Head of CSR at Yoma Strategic Holdings: “Get excited to do what you need to do every day. Findajob that you are good at. That’s where you will get fulfilment.” Emilie Röell, Founder at Doh Eain
: “Cultivate an attitude of the half-full glass, of being grateful.” Bradley Kopsick, Myanmar Country Manager at Insitor Management
: “You need to findacareer that helps other people inasustainable way.” Nicole Aye, Wynee [National Project Officer, Partnerships Development at UNESCO] as moderator.
Above: RESOURCES From the left, Yan Linn Thor, Wynee [Co-founder, evolx IT & Business Solutions]: “We want to give career guidance atanational scale. Wynee forum is such kind of resource." Kyi Pyar Chit Saw, Consultant at World Bank Group & former Fulbright scholar talking about following your passion and talents rather than your education.
Above: SECTOR-FOCUSED WORKSHOPS From the left, Myat Noe Aye, Head of Client Services at ANZ [SMU Myanmar Alumni Chapter]
on Banking & Finance. Kyaw Kyaw Win, CEO at Innoveller [SMU Myanmar Alumni Chapter]
on Technology. Kaung Set Zaw, Executive Director at Golden Express Tours & GM at Golden Eagle Ballooning [NTU Alumni Association Myanmar] on Tourism & Hospitality.
Above: SKILLS DEVELOPMENT WORKSHOPS: Khine Tharaphe Din, Deputy Head, Learning & Development at Yoma Bank[SMU Myanmar Alumni Chapter]
focused on project management (time management) skills. Hyeran Kim, Project Manager at United Nations Development Programme Myanmar, talked about making meaningful connections & networking skills: “Be you, be sincere, leave an impression.”
Above: Behind the Scenes. From the top left, Event briefing one hour before the event. Final touches before the event. YUMEC team members at the registration desk. Moe Thitsa, Wynee co-founder as Emcee. Some happy and engaged participants. Group pictures.
Tips on Lasting Long in Your First Job